Uyazisola ohubhe iphoyisa ngogodo | News24
Uyazisola ohubhe iphoyisa ngogodo
Bulawayo - Kubenesiphithiphithi namuhla esigodini saseBurawa eGuruve ngesikhathi owesilisa oneminyaka engu-58 ubudala ehubha ngogodo iphoyisa ebelizobopha indodana yakhe engayondli ingane yayo, emzini wakhe.
Umshushisi uVenesencia Musiiwa utshele inkantolo ukuthi ngomhlaka-19 Juni 2017, uPhilmon Kadzviti kusolwa ukuthi wajaha uStabon Chamunorwa oyiphoyisa laseGuruve ngemuva kokuzolanda indodana kaKadziviti.
Kuthiwa iphoyisa beliphethe incwadi egunyaza ukuboshwa kwayo ngelesondlo.
UChamurwa ubaleke wazephula wayocasha ehlathini, uKadzviti wadlula ngejubane kulelo hlathi, engaboni ukuthi leli phoyisa selicashile.
OLUNYE UDABA:Kuboshwe owayenguthishanhloko ngelokudlwengula umfundi
Leli phoyisa libe seliphuma ehlathini, laqhamuka ngemuva kukaKadzviti, lambopha.
Enkantolo uKadziviti ebuzwa ngodaba yiMantshi yeNkantolo yaseGuruve uShingirai Mutiro, uthe ubengazi ukuthi ujaha iphoyisa.
"Nkosi yenkantolo, bengingazi ukuthi ngijahana nephoyisa, ngibone ngamuva ukuthi yiphoyisa, ngesikhathi selingigaxa ozankosi ngakho ngiyalivuma icala," usho njalo.
Imantshi ithe: "Awulivumi icala njengoba uthe ubungazi ukuthi ujaha iphoyisa."
Icala lihlehliselwe umhlaka-7 Julayi, sekuqhutshekwa nokuqulwa kwecala lokuphula umthetho.
Khonamanjalo, indodana kaKadzviti, uKudakwashe, okuthiwa ubengayondli kahle ingane yakhe, namanje usagcwele amathafa.